Ihe A Na-aga Ịkọ ná Nkebi nke 14 | Ihe E Ji A Kụziri Ụmụaka Baịbụl
GỤỌ NKE Acholi Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Bassa (Cameroon) Batak (Dairi) Bicol Bislama Boulou Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuabo Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Edo Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Herero Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Iban Ibinda Igbo Iloko Indonesian Irish Isoko Italian Italian Sign Language Kabiye Kabuverdianu Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Mam Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mexican Sign Language Mixe Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Nias Nigerian Pidgin Norwegian Nyungwe Nzema Okpe Ossetian Otetela Pangasinan Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (European) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Russian Rutoro Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tandroy Tarascan Tatar Telugu Thai Tiv Tojolabal Totonac Tshwa Tsonga Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Uzbek Valencian Venda Vezo Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Ndị Kraịst oge mbụ ziri ozi ọma Alaeze Chineke ruo n’ebe kacha anya n’ụwa. Jizọs gwara ha ebe ndị ha ga-ekwusa ozi ọma. Ọ rụrụ ọrụ ebube mee ka ha zie ndị mmadụ ozi ọma n’asụsụ ha. Jehova mere ka ha kwusaa ozi ọma na-atụghị ụjọ, nyekwa ha ike ha ji die nsogbu ndị mmadụ nyere ha.
Jizọs gosiri Jọn onyeozi ebube Jehova n’ọhụụ. N’ọhụụ ọzọ, Jọn hụrụ ka Alaeze Chineke meriri Setan ma bibie ọchịchị ya ruo mgbe ebighị ebi. Jọn hụkwara ka Jizọs na otu narị puku na puku iri anọ na puku anọ ya na ha ga-eso achị, na-achị ụwa. Ọ hụrụ ka e mere ka ụwa niile ghọọ paradaịs, ndị niile bi na ya ana-efe Jehova, birikwa n’udo.
ISI IHE NKEBI A NA-AKỤZIRI ANYỊ
Anyị ịrụ ọrụ Jehova nyere anyị na-eme ka e too ya
Nyefee Jehova onwe gị n’ekpere, meekwa ihe ga-egosi ya na ị chọrọ ka Alaeze ya chịwa gị
Mee ka Jehova bụrụ ezigbo Enyi gị
Ndị Na-eso Ụzọ Jizọs Enweta Mmụọ Nsọ
Olee ọrụ ebube mmụọ nsọ nyere ha ikike ịrụ?
O Nweghị Ihe Ga-emeli Ka Ha Kwụsị Izi Ozi Ọma
Ndị ndu okpukpe gburu Jizọs, na-achọkwa ka ndị na-eso ụzọ ya kwụsị izi ozi ọma, ma ha agaghị akwụsịli ha.
Jizọs Ahọrọ Sọl
Sọl bụ ezigbo onye iro nke Ndị Kraịst. Ma, o teghị aka ihe agbanwee.
Kọnịliọs Enweta Mmụọ Nsọ
Gịnị mere Chineke ji gwa Pita ka ọ gaa n’ụlọ nwoke na-abụghị onye Juu?
Otú Ozi Ọma Si Ruo n’Ọtụtụ Obodo
Pọl onyeozi na ndị ya na ha so bidoro ikwusa ozi ọma n’obodo ndị dị anya.
Onye Na-elekọta Ụlọ Mkpọrọ Aghọọ Onye Kraịst
Olee ihe a kọrọ gbasara mmụọ ọjọọ, ala ọma jijiji nakwa mma agha n’akụkọ a?
Pọl na Timoti
Ha abụọ bụ enyi, sorokwa jee ozi ọma ruo ọtụtụ afọ.
A Kpọọrọ Pọl Gaa Rom
Ọtụtụ nsogbu bịaara Pọl onyeozi mgbe ọ na-aga ozi ọma n’ebe dị iche iche, ma o meghị ka ọ kwụsị.
Jizọs gosiri Jọn ọhụụ dị iche iche gbasara ihe ndị ga-eme n’ọdịnihu.
Ọhụụ ndị e gosiri Jọn, gosiri otú Alaeze Chineke ga-esi mee ka ihe dị mma n’ụwa.